iPhone ificationsma Ọkwa-adịghị arụ ọrụ? Lee ihe The Real Idozi! - Iphone
gịnị kpatara na iphone m enweghị oge
bọtịnụ mkpọchi na iphone 4 anaghị arụ ọrụ
imessage adịghị n'usoro na mac
Ma Ọkwa anaghị arụ ọrụ na iPhone gị ma ị maghị ihe ị ga-eme. Ọbụna ị na-ebido ịhapụ ozi dị mkpa, ozi ịntanetị, na ọkwa ndị ọzọ! N'isiokwu a, m ga-egosi gị ihe-eme mgbe iPhone arema Ọkwa na-adịghị arụ ọrụ .
Ana m anata ọkwa, ma iPhone m anaghị ada ụda!
Ọ bụrụ na ị na-enweta ọkwa na iPhone gị, mana ọ naghị akpọ mkpọtụ mgbe ị natara ọkwa, lee ngbanwe n'akụkụ aka ekpe nke iPhone gị. Nke a na-mara dị ka Ring / Silent mgba ọkụ, nke na-ewe gị iPhone n'ime Silent mode mgbe mgba ọkụ na-kewapụrụ kwupụta azụ gị iPhone. Push ndị ịgbanwee kwupụta n'ihu gị iPhone ịnụ audible njikere mgbe ị na-enweta a ngosi.
Ọ bụrụ na a gbanye mgba ọkụ ahụ n'ihu iPhone gị, mana ọ ka anaghị ada ụda mgbe ị natara ọkwa, lelee isiokwu anyị na esi nchoputa na ndozi okwu iPhone okwu .
youtube agaghị akpọ na ekwentị m
Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-enyere gị aka ịchọpụta ma dozie ezigbo ihe kpatara na ọkwa anaghị arụ ọrụ na iPhone gị!
Obere glitch ngwanrọ nwere ike ịbụ ihe kpatara iPhone gị anaghị enweta ọkwa. Mgbe ụfọdụ ibidogharịa iPhone gị nwere ike idozi ụdị obere nsogbu ngwanrọ ndị a.
Iji gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' pụtara na ihe ngosi. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone X, pịa ma jide bọtịnụ Side na bọtịnụ olu olu. Mgbe ahụ, swipe akara ngosi ike site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPhone gị.
Chere ma ọ dịkarịa ala 15 sekọnd, wee pịa ma jide bọtịnụ ike (bọtịnụ Akụkụ na iPhone X) ruo mgbe ị ga-ahụ akara Apple gosipụtara n'etiti ngosipụta ahụ.
Gbanyụọ Ekwela Nsogbu
Otu n'ime ihe ndị kasị ihe mere iPhone arema Ọkwa na-adịghị arụ ọrụ bụ n'ihi Ekwekwala nsogbu agbanwuru. Ekwekwala nsogbu bụ atụmatụ na-emechi oku niile, ederede, na ihe ngosi ndị ọzọ na iPhone gị.
Iji gbanyụọ Dogbula, mepee ngwa Ntọala na iPhone gị wee pịa Enyena nsogbu . Mgbe ahụ, kpatụ mgba ọkụ na-esote Adabakwala nsogbu iji gbanyụọ ya. ’Ll ga-amata na Ekwela nsogbu mgbe agbanwere mgba ọkụ na aka ekpe.
You na-akwọ ụgbọala na nso nso a
Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala ugbu a, Ekwekwala nsogbu mgbe ị na-akwọ ụgbọala enwere ike agbanwuru ma ọ nwere ike agbanye. Pịa Home bọtịnụ na gị iPhone na enweta Anaghị m akwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na ozugbo pụtara na gị iPhone.
Cheta na: Ekwela nsogbu mgbe ụgbọala bụ ihe iOS 11 atụmatụ. Ọ bụrụ na etinyeghị iOS 11 na iPhone gị, ị nwere ike ịhapụ usoro a.
Gbanwuo Gosi nhụchalụ
Ọ bụrụ na amamọkwa iPhone anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike gbanwee mgbe niile Gosi nhụchalụ na ngwa Ntọala. Ihe ngosi ngosi bụ obere ọkwa sitere na ngwa ndị na-egosi na ngosipụta iPhone gị.
Mepee Ntọala ngwa na enweta Ma Ọkwa -> Gosi Ntụle . Gbaa mbọ hụ na enwere akara akara n’akụkụ Mgbe niile.
otu esi edozie ihuenyo ojii na iphone 6
Na-anabataghị ificationsma Ọkwa Site Otu Ngwa Ngwa?
Ndi iPhone notma Ọkwa anaghị arụ ọrụ maka naanị otu ngwa? Gị iPhone-enye gị ohere gbanyụọ niile forma Ọkwa maka kpọmkwem ngwa, nke nwere ike ịbụ nsogbu ebe a.
Gaa na Ntọala -> .ma ọkwa wee pịa ngwa ahụ ị naghị anata ọkwa site na. Jide n'aka na mgba ọkụ na-esote Ekwe ka Notma Ọkwa agbanwuru. Ga-ama ngbanwe ahụ dị mgbe ọ na-acha akwụkwọ ndụ!
Ọ bụrụ na agbanyere Notma Ọkwa maka ngwa ahụ, lelee iji hụ ma ọ bụrụ na melite ngwà dị site na ịga na Storelọ Ahịa App wee pịa taabụ mmelite mmelite. Ọ bụrụ na melite ngwà dị, pịa ya Mmelite bọtịnụ n'aka nri nke ngwa ahụ.
ihe achọrọ maka ịlụ na usa
Lelee njikọ Wi-Fi & Cellular gị
Ọ bụrụ na iPhone ejikọtaghị na Wi-Fi ma ọ bụ netwọ cellular gị, iPhone gị agaghị enweta ọkwa.
Akpa, lelee ịhụ ma ọ bụrụ na iPhone gị ejikọrọ na Wi-Fi network site na imeghe ngwa Ntọala na ịme ọpịpị Wi-Fi. Gbaa mbọ hụ na agbanwuru mgba ọkụ na-esote Wi-Fi.
Ọ bụrụ na ị hụ akara nlele na-esote aha netwọk Wi-Fi gị n'elu menu a, iPhone gị ejikọrọ na Wi-Fi. Ọ bụrụ na ijikọghị na netwọk Wi-Fi, pịa na nke ịchọrọ ijikọ n'okpuru Họrọ otu network…
Can nwere ike ịlele ngwa ngwa iji hụ ma agbanyere Cellular site na imeghe Ebe Njikwa ma lee bọtịnụ Cellular. Ọ bụrụ na bọtịnụ ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Cellular agbanwuru!
Tọgharia Ntọala niile
Tọgharị niile ntọala bụ ikpeazụ anyị-okporo mmiri idozi ọ bụla na-akpata software nsogbu na ike-egbochi gị iPhone si na-ificationsma Ọkwa. Ntọgharị a ga-eme ka ntọala iPhone niile gị na nrụpụta ụlọ ọrụ, yabụ ị ga-alaghachi ma tinyeghachi okwuntughe Wi-Fi gị ma hazie ntọala kachasị amasị gị.
Iji tọgharịa niile nke ntọala gị iPhone, na-aga Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia pịa na Tọgharia Ntọala niile . A ga-agwa gị ka itinye akara passcode gị, wee gosi mkpebi gị site na ịpịgharịa Tọgharia Ntọala niile. Mgbe nrụpụta zuru ezu, iPhone gị ga-amalitegharị onwe ya.
gịnị kpatara na agaghị arụ ọrụ ụlọ ahịa ngwa
Mmezi Nhọrọ N'ihi na gị iPhone
99.9% nke oge ahụ, ọkwa anaghị arụ ọrụ na iPhone gị n'ihi nsogbu ngwanrọ ma ọ bụ nhazi ezighi ezi. Agbanyeghị, enwere obere ohere na antenna nke jikọtara iPhone gị na Wi-Fi na netwọkụ cellular agbajiri, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwee nsogbu na nso nso a ijikọ iPhone na netwọki ikuku.
Ọ bụrụ na AppleCare kpuchiri iPhone gị, gbalịa ịkpọtụrụ Apple nkwado ma ọ bụ ịtọlite ​​oge atọrọ na atlọ Ahịa Apple gị . Anyị na-akwadoro gị nke ukwuu Pulse , otu ụlọ ọrụ na-achọ nrụzi na-eziga ọkachamara maka izute gị n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọrụ gị.
Ma Ọkwa na-arụ ọrụ na iPhone gị ọzọ na ị naghị efu ozi dị mkpa na ọkwa. Oge ọhụụ anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, ị ga-ama otu esi edozi nsogbu ahụ! Enwere onwe gị ịhapụ okwu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ị nwere na ngalaba nke dị n'okpuru.